सेतो पानी बग्ने समस्या र त्यसको परिणाम - ज्ञानविज्ञान
पछिल्लो समय प्रायः महिलामा सेतो पानी बग्ने समस्या देखिन थालेको छ । सानै उमेरका महिलामा पनि यस्तो समस्या देखिन थालेको छ । विशेष गरी अस्वस्थकर जीवनशैली र खानपानका कारण यस्तो समस्या बढेको हो । सेतो पानी बग्नेको सामान्य र जटिल अवस्था हुन्छ :
कहिलेकाहीँ कारणविनै सेतो पानी बग्ने गर्छ । त्यसलाई त्यति धेरै जटिल मानिँदैन । कसैलाई इन्फेक्सनका कारणले यस्तो प्रकृतिको पानी बग्ने गर्छ । त्यस्तै, दूध चुसाउने आमाको पनि सेतो पानी बग्न सक्छ । यसलाई सामान्य अवस्थाको रूपमा लिइन्छ ।
परिवार नियोजनका विभिन्न साधन प्रयोग गर्नेहरूमा पनि सेतो पानी बग्ने समस्या हुन्छ । त्यसैले यस्ता साधनको प्रयोगमा सावधानी अपनाउन जरुरी हुन्छ । यद्यपि, यसरी उत्पन्न भएको समस्यालाई त्यति धेरै गम्भीर रूपमा चाहिँ लिनुपर्दैन ।
महिनावारी भएको केही समयअघि र पछि सेतो पानी बग्ने हुन सक्छ । महिनावारी भएको १५ दिनपछि यस्तो क्रम बढ्दै जान्छ र महिनावारीपछि रोकिने हुन्छ । सलाई सामान्य अवस्थाको रूपमा लिइन्छ ।
सेतो पानी बग्ने समस्याले कहिलेकाहीँ जटिल रूप लिन सक्छ । बाह्रै महिना पानी बगिरहने समस्या छ भने यसलाई जटिल रूपमा लिनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा चिकित्सककहाँ पुग्नका लागि ढिला गर्नुहुँदैन ।
यौनअंगको सरसफाइपश्चात् पनि नराम्रो गन्ध आउने, चिलाउनेजस्ता समस्या देखिएमा सजग हुनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा पहेँलो कलरको, रगत मिसिएजस्तो र दहीजस्तो बाक्लो पानी आउने गरेमा तत्काल जाँच गरी समाधानको उपाय खेज्नतर्फ लाग्नुपर्छ । कहिलेकाहीँ ढिक्का–ढिक्का पानी बग्ने गर्छ । जुन इन्फेक्सनका कारण पनि हुन सक्छ ।
यस्ता असामान्य लक्षण देखिएमा तत्काल स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुको विकल्प हुँदैन ।
यस्ता समस्या भएका महिलाले खानामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । जंकफुडको प्रयोग र अव्यवस्थित जीवनशैलीका कारण पनि यस्तो समस्या बढ्न सक्छ ।
हरेक महिलाको सेतो पानी बग्ने गर्छ । तर, असामान्य लक्षण देखिएमा इन्फेक्सन भएको हुन सक्छ । यसले जटिल रूप पनि लिन सक्छ ।
यस्ता महिलामा पाठेघरमा समस्या, बच्चा नहुनेलगायत जटिलता देखिन सक्ने भएकाले समयमै उपचार गर्न जरुरी हुन्छ ।
Don't Miss it तपाई को स्वास्थ्य राम्रो छ या नराम्रो कसरि अहुमान गर्ने ??
Up Next केहि आश्चर्यजनक तत्यहरु जुन सुन्दै अचम्म लाग्छ |
भुलेर पनि खाली पेटमा खान नहुने यी खानेकुराहरु
गर्मीमा अनुहारको विशेष ख्याल राख्नुपर्दछ । गर्मीमा अनुहारको रोम छिद्र खुल्छ तर फोहोर जाने सम्भावना बढी हुने भएकाले अनुहारको बढी…
यस्ता छन्, छालालाई सुन्दर राख्न खानु पर्ने खानेकुरा
सी फूड, गेडागुडी र प्याज जिंकले शरीरका कोषिकालाई हुर्काउन, बढाउन मद्दत गर्छ । यस्ता कोषिकाले छालालाई जवान र आकर्षक बनाउँछन्…
गर्मी मौसममा पाइने खर्बुजाका फाइदा – शितल पनि हुने र यस्ता रोगहरुबाट पनि बच्ने
गर्मी मौसम विभिन्न प्रकारको फलफूलहरु बजारमा पाइन्छ । बजारमा सिजन सिजनमा पाइने फलफूलले सर्बसाधरणलाई आर्कशित गरिरहरेको हुन्छ ।त्यसमा पनि रातो…
तनावलाई कम गर्ने केही टिप्स, यस्ता छन्
१. संगीत सुन्नुहोस् वा घुम्न जानुहोस्ः तनावलाई कम गर्नका लागि तपाईंले संगीतलाई आफ्नो जीवनको अंग बनाउनुपर्छ । दैनिक टहल्ने बानी…
खाना खाए लगत्तै गर्न नहुने गल्ती
खाना खाए लगत्तै गर्न नहुने गल्तीहरु यस्ता छन् | १.धूम्रपान खानापछि धूम्रपान गर्ने बानी धेरैको हुन्छ । यसो गर्नु…